Sucuudiga oo 30 sanno kaddib Soomaaliya usoo magacaabay Safiir – Radio Daljir
Sucuudiga oo 30 sanno kaddib Soomaaliya usoo magacaabay Safiir
Oktoobar 9, 2021 12:13 g 0
Boqortooyada Sucuudiga ayaa safiir rasmi ah u soo magacowday Soomaaliya.
Danjire Axmed bin Maxamed Al-Mawluud ayaa noqon doona safiir u horreeyey ee Muqdisho fadhiisan doona 30 sanno kaddib.
Boqorka Sucuudiga ayaa ku dhaariyey danjiraha habka-fogaan-aragga.
Wafdi ka socda Wasaaradda Arrimaha Dibadda Sacuudiga ayaa bishii la soo dhaafay socdaal ku yimid Muqdisho si ay u darsaan suurtagalnimada in Safaaradda Sacuudi Carabiya laga furo Soomaaliya.
Safarku wuxuu qayb ka ahaa qorshayaasha Riyaad ee ah inay fidiso shabakadeeda diblomaasiyadeed ee Geeska Afrika.